गोहीका पहेंलो आँखा, २०० editor सम्पादकीय सफलता वर्तमान साहित्य
गोहीहरूको पहेंलो आँखा (२००)) एक उपन्यास हो उत्कृष्ट विक्रेता फ्रान्सेली लेखक, पत्रकार र शिक्षक क्याथरिन प्यानलबाट। बदलेमा, यो पुस्तक एक बेनामी त्रिकोणको निरन्तरता द्वारा जारी गरिएको पहिलो किस्त हो कछुवाहरूको ढिलो वाल्ट्ज (2008) र सेन्ट्रल पार्क गिलहरीहरू सोमबार दु: खी छन् (2010)।
थप रूपमा, को जबरदस्त सम्पादकीय सफलता लेस येक्स जौंस डेस मगरमच्छ - फ्रान्सेलीमा मौलिक नामले प्यानललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बनायो। वास्तबमा, यो उपाधि, अन्य मध्ये, माईसन डे ला प्रेसे पुरस्कार प्राप्त भयो। त्यस्तै, उनको कथा २०१ screen मा सिसिल टेलरम्यानको निर्देशन अन्तर्गत ठूलो पर्दामा ल्याइएको थियो; Emmanuelle Béart र जुली Depardieu अभिनीत।
1 क्याथ्रीन प्यानकोलद्वारा गोहीको पहेंलो आँखाको सारांश
1.2 माध्यमिक वर्णहरू
1.3 इन्फ्लेक्सन पोइन्ट
2.3 काम को अवधारणा
2.3.2 वास्तविक चरित्रमा आधारित एक नायक
2.4 त्रयीको जन्म
3 लेखकको बारेमा, क्याथरिन प्यानोल
3.1 पत्र र पत्रकारिता संग जोडिएको सम्पूर्ण जीवन
3.2 क्याथरीन प्यानलका पुस्तकहरू
सारांश गोहीहरूको पहेंलो आँखाक्याथरिन प्यानोल द्वारा
जोसेफिन एक -० बर्षे महिला हुन् जो पेरिसमा उनको पति एन्टोइन र उनीहरूका दुई छोरीहरू होर्टेन्स र जोसँग बस्छिन्। सुरुमा, उनको विवाहको स्पष्ट विफलता को बावजुद, उनी आफ्नो असुरक्षाका कारण निर्णायक निर्णय गर्न असमर्थ छन। जे भए पनि, ब्रेकअप अपरिहार्य छ, किनभने उनको श्रीमान् हतियार बोक्ने ठाउँबाट निकालिएपछि उनी दयनीय देखिन्छन्।
अधिक inri को लागी, एन्टोइन एक वर्षको लागि त्यो अवस्थामा रहेको छ र, आफैंले हल्लाउनुको सट्टा, उनी आफ्नी पत्नीप्रति अवफादार हुन थाल्छन्। त्यसपछि तार्किक बिछोडको साथ अन्तिम छलफल आउँछ। त्यस क्षण देखि, केहि हदसम्मको असली र एक दूसरेसँग जोडिएका घटनाहरूको श्रृंखला जारी गरियो। ती मध्ये एउटा काम एन्टोइनले अफ्रीकामा गोही फार्मको प्रबन्धकको रूपमा लिन्छ।
अन्य अनौंठो घटनाहरूले माध्यमिक वर्णहरू समावेश गर्दछ। पहिलो: रहस्यमय शिर्ली, एक विशिष्ट छिमेकी; र दोस्रो: जोसेफिनकी चिसो आमा हेन्रिएट। पछिल्लो विवाहले दोस्रो विवाहमा मार्जिन गोर्सेसँग विवाह गर्‍यो, जसले उनलाई सधैं मनपराउने ग्लैमरस जीवनको लागि अनुमति दिएको छ।
घटनाहरूको पाठ्यक्रमले क्रान्तिकारी मोड लिन्छ जब आईरिस, जोसेफिनको आकर्षक बहिनी, उनले उपन्यास लेखेको दाबी गर्छन् यद्यपि यो झूट हो। यति मात्र कहाँ हो, उसले छलीलाई अन्त्यसम्मै राख्न रुचाउँछन् जहाँसम्म कि उनले आफ्नी बहिनीलाई पाठ लेख्न भने। यद्यपि जोसेफिनलाई यो विचार मनपर्दैन, अन्तमा उनी धेरै पैसा (र उनको debtsण चुक्ता गर्ने) बदलीमा पाठ विस्तार गर्न सहमत हुन्छिन्।
केहि महिना पछि पुस्तक प्रकाशित हुन्छ, जसको सामग्री विशाल मा आधारित छ ऐतिहासिक ज्ञान जोसेफिनद्वारा १२ औं शताब्दी। प्रक्षेपण सम्पादकीय सफलता भयो; आइरिस सबै प्रसिद्धि पाउँदछ; जोसेफिन, कमाई। यद्यपि इतिहासकारका साथीहरूले शंका गरे कि उनी पुस्तकका साँचो लेखक हुन् र यसले बहिनीहरूको सम्बन्धलाई असर गर्छ।
पहेलो आँखा को ...
कथानकले पेरिस जस्ता महानगरामा सामान्य पुरुष र महिलाहरूको दैनिक जीवन वरिपरि परिस्थितिहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ, कथाका महिला सदस्यहरू झूटले भरिएको कहानीको बीचमा उनीहरूको अपूर्ण इच्छाहरू प्रकट गर्दछन् (प्रत्येक आफ्नै तरिकामा)। तर सबै कुरा आँसु र निराशा होईन, प्रेम, हाँसो र सपनाको पनि ठाउँ छ।
लेस येक्स जौंस डेस मगरमच्छ यो धेरै प्रतीकात्मकताले भरिएको पुस्तक हो। सुरू गर्न, सरीसृपको पहेंलो आँखाले विभिन्न प्रकारका डरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ: मृत्यु, जीवनको, आफूलाई बन्ने, हराउनको लागि, इमानदार हुन ... सबै पात्रहरू केहि द्वारा धेरै डराउँछन्।
त्यस्तै, पान्कोल आशंकाको माध्यमबाट उनका चरित्रका गुणहरूको तुलना गर्दछ। उदाहरण को लागी: हेन्रिएट गोर्ज कुनै पनि कुरासँग डराउँदैनन्, मात्र पर्याप्त पैसा भएको थिएन। यसै आधारमा, उनले आफ्नो कान्छी छोरी जोसेफिनलाई घृणा गर्छन्, जो संवेदनशील र उदार छ। यसको सट्टा, उनकी जेठी छोरी, आइरिस, उनी हेन्रिएट (एक छवि) लाई मनपर्ने सबै चीजहरूमा सारिन्छ: शक्ति र शक्ति।
काम को अवधारणा
क्याथरिन प्यानोल विस्तृत कसरी २०१ story मा अष्ट्रेलियाली पोर्टलको सोफी मेसनलाई प्रदान गरिएको अन्तर्वार्ताको बेला उनको कथा सँगै राख्नुहोस् फायरबीरको प्वाँखd। त्यसो भए, फ्रान्सेली लेखकले इसाक डायनेसेनको भनाइलाई संकेत गरे जसमा यस्तो लेखिएको छ: "यो धारणाबाट सुरू हुन्छ, नाटकको एक प्रकारको पूर्वसूचना ... त्यसपछि पात्रहरू आउँछन्, दृश्य लिन्छन् र कथा बनाउँदछन्"।
गोहीहरूको पहेंलो आँखा क्याथरिन प्यानलले बच्चा भएदेखि पढेका विभिन्न थिम र शैलीहरूको प्रमाण दिन्छ। ठीक छ, बिभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा उनले दावी गरी कि उनलाई मिस्र, अरबी र स्कान्डिनेभियन पौराणिक कथा पढ्न रमाईलो लाग्थ्यो। त्यस्तै फ्रान्सेली लेखकले भने काराजामोभ भाइहरू (Dostoevsky), ले पेरे गोरियट (बालजाक), र डेभिड कपरफिल्ड।
वास्तविक चरित्रमा आधारित एक नायक
प्यानकोलले मेसनलाई वर्णन गरे कि उनको नायक वास्तविक व्यक्तिमा आधारित छ। “उनी र मैले कुरा गरेका थियौं, उनीसँग एउटा पुरानो जमानाको लुक थियो, थोरै मनमोहक र मैले सुनें, मैले त्यो चिनारी महसुस गरें! जोसेफिनको जन्म हुन लागेको थियो "। यी शब्दहरूको साथ, फ्रान्सेली लेखक उनले एक नर्मन्डी समुद्री किनारमा भेटे एक शोधकर्ता वर्णन।
साथै, प्यानलले उल्लेख गरे कि CNRS अन्वेषक (वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि राष्ट्रीय केन्द्र - फ्रेन्च एक्रोनिम) single० बर्षसम्म एकल अध्ययनमा केन्द्रित थियोफ्रान्स मा १th औं शताब्दीका ट्राभल अखबारका विक्रेताहरू। त्यसबेलादेखि लेखकले जोसेफिन वरपरको संसार विकास गरे, जो वास्तविक चरित्रको विपरीत १२ औं शताब्दीका पात्रहरूको विश्लेषण गर्दछन्।
सुरुमा, गलिक लेखकले त्रयीको विकासको बारेमा सोचेनन्। यद्यपि पहिलो पुस्तकको अन्तमा, प्यानोलले चरित्रहरूको बारेमा सोच्न जारी राख्यो ... "उनीहरूको जीवनलाई के भयो? के तपाई दु: खी वा खुसी हुनुहुन्छ? यस तरिकाले, दुई क्रमिक किस्तहरू देखा पर्‍यो जसमा अन्य पात्रहरूको फरक दृष्टिकोण उजागर गरियो।
लेखकको बारेमा, क्याथरिन प्यानोल
उनको जन्म अक्टोबर २२, १ 22 ;1954 मा मोसाक्कोको क्यासाब्लान्कामा भएको थियो; त्यसबेला यो शहर अझै पनि फ्रान्सेली संरक्षणको हिस्सा थियो। जब उहाँ पाँच वर्षको हुनुहुन्थ्यो, सानो क्याथरिन आफ्नो परिवारको साथ पेरिस बसाई। पछि, युवावस्थामा उनले फ्रान्सेली र ल्याटिन शिक्षिका बन्ने प्रशिक्षण पाए।
पत्र र पत्रकारिता संग जोडिएको सम्पूर्ण जीवन
70० को बीचमा, पान्कोलले नान्टेर विश्वविद्यालयको मोर्डन लेटरमा आफ्नो डक्टरेट पूरा गरे र आफ्नो पत्रकारिता शुरू गरे। आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरेपछि, Moi d'abord (म पहिले, १ 1979।)), उनी न्यू योर्क सरे। त्यहाँ, उनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा रचनात्मक लेखन कोर्स लिन भर्ना गरे र त्यसपछि त्यो विश्वविद्यालयमा काम गरिरहे।
सन् १ 1981 XNUMX१ मा फ्रान्सेली लेखकले सम्पादकको रूपमा काम गर्न शुरू गरे उपन्यास र म्यागजिनहरूमा स्तम्भकारको रूपमा Elle y पेरिस मिलान. माथि उल्लेखित मिडियामा, उनले आफ्नो अन्तर्वार्ताको शैलीका कारण पर्याप्त कुख्यातता प्राप्त गरे। बिग एप्पलमा हुँदा, क्याथरिन प्यानोलले विवाह गर्‍यो र दुई बच्चा (एउटा महिला र एउटा पुरुष) थियो। उनी हाल सम्बन्धविच्छेद गरी पेरिसमा बस्छिन्।
क्याथरीन प्यानलका पुस्तकहरू
यूजीन & मलाई (२०२०) पंचोल द्वारा हस्ताक्षर गरिएको बाईस-दोस्रो पुस्तक हो, जसले चार दशकमा फ्याँकिएको साहित्यिक जीवनको कदर गर्दछ। यो एक दौड हो जुन २०० in मा सुरु भएकोमा धन्यवाद गोहीहरूको पहेंलो आँखा. अचम्मको कुरा होइन, यो पाठ लगभग दर्जन भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ; ती मध्ये: चिनियाँ, कोरियाली, इटालियन, पोलिस, रूसी, यूक्रेनी र भियतनामी।
उल्लेख गरिएको बाहेक Moi d'abord, लेस येक्स जौंस डेस मगरमच्छ y Eugène र Moi, Pancol को पुस्तक सूची निम्न शीर्षकहरु द्वारा पूरा भयो:
बर्बर (बार्बरे, 1981)
स्कार्लेट (स्कारलेट, हो सम्भव छ, 1985)
क्रूर मानिसहरू सडकमा हिंड्दैनन् (लेस होम्स क्रुएल्स ने सर्कुन्टल लेस र्यूहरू, 1990)
बाहिरबाट (Vu de l'extérieur, Seuil, १ 1993 XNUMX))
यस्तो राम्रो चित्र: ज्याकी केनेडी (१ 1929 २ -1994 -१XNUMX XNUMX)) (Une si Belle छवि, पोइन्ट्स पुनः जारी गर्नुहोस्, 1994)
अझै एक नृत्य (एनकोर अन डान्स, 1998)
एट मोन्टर स्पष्ट रूपमा असीमित amour ... (2001)
एक दूरी मा एक मानिस (अन homme à दूरी, 2002)
मलाई समात्नुहोस्: जीवन चाहना हो (इम्ब्रसेज-मोइ, 2003)
कछुवाहरूको ढिलो वाल्ट्ज (ला भेल्से लेन्टे देस कछुए, २००))
सेन्ट्रल पार्क गिलहरीहरू सोमबार दु: खी छन् (लेस इकुरेउल्स डे सेन्ट्रल पार्क दु: खी छ, 2010)
केटीहरू [एपिसोड १: दिनको समयमा नृत्य] (2014)
केटीहरू २ [एपिसोड १: खुशीबाट केवल एक कदम टाढा] (2014)।
केटीहरू २ [एपिसोड १: जीवनको लागि आऊ] (2014)
तीन चुम्बनहरू (ट्रोइस बाईसरहरू, 2017)
बेड बग (2019)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » गोहीहरूको पहेंलो आँखा